China SPC Ft SM-021 rụpụta na Factory | N'akụkụ
Ka ọ dị ugbu a, ọkpụrụkpụ nke spc abụghị 4mm na 6mm nkọwa abụọ dịkarịsịrị karịa, n'ihi na mba ahụ enweghị ụfọdụ ọkọlọtọ maka etu ala ahụ si dị, yabụ etu ụlọ ala nrụpụta nke ala ọ bụla ka dị. The spc n'ala bụ mkpa, ma ibu dị elu na-eyi ndị na-eguzogide dị elu. Ugbu a, kacha mma mma ma ọ bụ mbupụ-ụdị flooring ụkpụrụ, na-acha ọcha ala ihe, ihe na-elu ìhè nnyefe. Elu na-eguzogide ọgwụ dị arọ na formaldehyde. Nke abụọ bụ SPC n'ala, nke a na-agwakọta ya na ihe eji emegharị emegharị. Fọdụ ka na-erute ọcha n’okpuru mana ha anaghị agbanwe agbanwe. Dị mfe crisp. Enwekwara efere na-adịghị mma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. A na-ejikarị nke a eme ihe n'ụlọ. Ngwaahịa adịghị mkpa ka a webata oke, ị nwere ike iji tinye na nnukwu ụlọ ahịa ahụ na ọdịiche bụ n'ezie square nke dollar ole na ole nke nsogbu iji hụ mmasị ịzụta onye ọ bụla.
Nkpo okwute nwere nnukwu mmetụta na ndụ mmadụ kemgbe ụbọchị a mụrụ ya. Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ plastik na-ejikarị eme ihe na ndụ ndị mmadụ, nnukwu iji ụgbọelu na-arụ obere ihe na tebụl ndị mmadụ na-eji ngwaahịa plastik, ngwaahịa plastik na ụlọ ọrụ ihe owuwu ọtụtụ ebe. Pvc plastic dị ka ihe bụ isi nke ala ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-amasị ndị na-eri ihe, ya bụ - okwute-plastic flooring.
Site na ikike nke nnwale ahụ, ala ụlọ nwere acid siri ike na nguzogide alkali siri ike, nwere ike iguzogide ule nke gburugburu ebe obibi siri ike, dabara adaba maka ojiji n'ụlọ ọgwụ, ụlọ nyocha, ụlọ ọrụ nyocha na ebe ndị ọzọ.
Ebumnuche nke nhicha na ndozi SPC
1. Mma ọdịdị: adọ wepu unyi-eme kwa ụbọchị iji, ka SPC n'ala n'ụzọ zuru ezu na-egosi ya pụrụ iche anya na eke gloss.
2. Chebe ala ahụ: kpuchido ala SPC site na kemịkalụ na-enweghị ihe ọghọm, akara njedebe sịga, mbipụta akpụkpọ ụkwụ, mmanụ na mmiri, belata ọnụego ejiji nke elu ahụ, nye egwuregwu zuru oke maka ịdịru ala nke onwe ya, ka ịgbatị ya ndụ ndụ nke ala.
3. Nlekọta dị mma: n'ihi usoro nkwekọrịta dị elu na ọgwụgwọ pụrụ iche nke ala SPC, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya na nhicha kwa ụbọchị, nke nwere ike ime ka ala dịkwuo mfe ilekọta ma mee ka ndụ ya dịkwuo ogologo.
Nke gara aga: SPC ala SM-020
Osote: SPC Ala SM-025
SPC Ft SM-026